“Cirfo” oo sheegay in Shabaab laga sifeeyn doono dhawaan gobolka Galgaduud – Radio Muqdisho
“Cirfo” oo sheegay in Shabaab laga sifeeyn doono dhawaan gobolka Galgaduud
Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye “Cirfo” ayaa sheegay inuu socdo qorshihii ugu dambeeyay ee gobolkaasi looga xoreyn lahaa maleeshiyaadka Alshabaab.
“Cirfo” ayaa tilmaamay in uu meel wanaagsan marayo qorshaha la doonayo in qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Galgaduud looga xoreeyo maleeshiyaadka Al-shabaab, isagoo intaa raaciyay in lagu jiro diyaar garowgii ugu dambeeyay.
Gudoomiye “Cirfo” ayaa hoosta ka xariiqay ineey dhawaan bilaaban doonaan howlgalladii ugu dambeeyay ee Shabaab looga sifeeyn lahaa gobolka, kaasoo ay iska kaashanayaan Ciidanka XDS iyo kuwa AMISOM.
Dhinaca kale “Cirfo” ayaa xusay in xaaladda gobolku ay degantahay islamarkaana aysan iminka ka jirin dagaal beeleedyo iyo xasilooni darro kale.
Wuxuu ugu baaqay shacabka ku nool gobolka ineey ciidamada kala shaqeeyaan sidii nabad diidka looga xoreeyn lahaa gobolka oo dhan.
Wasiirrada Warfaafinta Kuwait iyo Soomaaliya oo kulan ku yeeshay Kuwait(Sawirro)